Nagarik News - No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Nepal, राष्ट्रिय दैनिक - १२ वर्षमा तीन दिन हिँडेर १० दिन श्रम
मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६, ०२ : ३८
बुधबार, १२ पुष २०७४, ०८ : ५९ | सुशील आचार्य
यतिबेला म मलेसियामा छु । तीन वर्ष भयो, म यता श्रम गर्छु । देशमा अनेक परिवर्तन आएको कुरा गरिन्छ, देखिन्छ, पढिन्छ । एउटा ‘परिवर्तन’मा म पनि सहभागी थिएँ । करकापमै सही, देशका लागि केही योगदान मैले पनि गरेको थिएँ । १२ वर्षको उमेरमा सल्यान जिल्लाको फलाबाङबाट तीन दिन हिँडेर मैले १० दिन सडक–श्रम गरेको छु । यसमा मलाई कुनै खेद छैन । तर, देश बनाउँछौँ भनेर मान्छे काटेर, मान्छेलाई तर्साएर, बालश्रम गराएर माथि पुगेकाहरूको यो दलालीपन, सुकिलामुकिलापन देखेर उदेक लाग्छ । आज मजस्ता धेरै युवा पराईमा श्रम गर्न बाध्य छौँ । के यही हो परिवर्तन ? खोइ देशमा उद्यम, रोजगारी ?
२०६२ फागुन महिनाको कुरा हो । म लगायत गाउँका धेरै मान्छेहरू दाउरा काट्न जंगलमा गएका थियौँ । अचानक नजिकैको गाउँका माओवादी युवा (हाल उनले माओवादी छोडिसके, मजस्तै विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन्) हामीले दाउरा काटिरहेको ठाउँमा आए । उनले अनुरोध हैन, आदेश अझ धम्कीको स्वरमा भने— सबै जना बाटो खन्नका लागि आजै रोल्पा जानुपर्छ र नगए हात–खुट्टा भाँचिदिइन्छ ।
यस्तो सुनेर म त ठाउँका ठाउँका निर्जीव जस्तो भएँ । सबैजना त्रसित भए । सबै मानिस माओवादीको डरले गर्दा बाटो खन्न रोल्पा जाने निर्णय गरे । म कक्षा ६ मा पढ्दै थिएँ । दाइ एसएलसीको तयारीका लागि घरबाहिर हुनुहुन्थ्यो। बुवा पनि घर बाहिर नै हुनुहुन्थ्यो । मलाई बाटो खन्न जानुपर्छ भन्दै दबाब आयो ।
आमासँग ५० रुपियाँ लिएर म बाटो खन्नका लागि रोल्पा जाने निर्णय गरँे । मनमा अनेक कुरा खेलिरहे । मलाई बाँचेर फर्किन्छुजस्तो नै लागेन । बाटाभरि उनीहरू अनेक कुरा गर्छन् । तर, मलाई डर मात्रै लागिरह्यो । हामी पहिलो दिन रिम गाविसको खोलीगाउँमा बास बस्ने कुरा भयो ।
हाम्रो गाउँबाट हिँडेका हामी करिब ३० जना जति थियौँ । साँझ बास बस्दा सबै मानिस एउटै घरमा नअट्ने भएकाले हामी तीन÷चार जनाको समूहमा छरियौँ । म यसरी एक्लै कहिल्यै हिँडेको थिइनँ । मलाई बिदा गरेकी आमाको रुन्चे र मलिन अनुहार मेरो आँखा वरिपरि घुमिरह्यो । म पटक्कै निदाइनँ, रातभर । बिहान चार जति बजेको थियो । माओवादीका मान्छेहरूले हामीलाई उठाउन थाले । चाँडै उठ्नुपर्ने कारण मैले बल्ल थाहा पाएँ, त्यो रहेछ, वारिपट्टि कपुरकोटमा आर्मीको क्याम्प थियो । ‘हत्यारो शाही सेना’ले देख्छन् भनेर माओवादीले हामीलाई अँध्यारैमा हिँडाए । जंगलको बाटो भए पनि मलाई वन्यजन्तुको भन्दा वन्यमान्छेको डर लाग्यो । उनीहरूको आदेश थियो, लाइट (टर्च) नबाल्ने, नबोल्ने । उज्यालो देखे तातो गोली खान सकिन्छ भन्ने सुन्दा मेरो सातो नै उड्यो । गोली चलाउन सक्छन्, सावधान भनिरहे बाटैभरि । कहिल्यै नहिँडेको जंगलको बाटो छामछाम छुमछुम गर्दै, लड्दैबड्दै हिँडियो । कोइला लेख काट्दै रोल्पा प्रवेश ग¥यौँ । तीन दिन लगाएर हामी बाटो खन्ने ठाउँ कोर्चाबाङ पुग्यौँ । कोर्चाबाङ पुग्नासाथ हामीलाई एउटा नाटक देखाइयो र बाटो खन्ने भाडाकुँडाको जिम्मा लगाइयो । मनमा डर उब्जिरहेको थियो, कतै आर्मी त आउँदैन भनेर । डरै डरमा बिताइयो ।
म बाटो खन्न गएको टोलीमा सबैभन्दा कान्छो र निक्कै ख्याउटे थिएँ । म १२ वर्षको त थिएँ । रोल्पाको कोर्चाबाङ गएर १० दिनसम्म बाटो खन्यौँ । त्यो फागुनको महिना थियो । चिसो धेरै थियो । जिउमा एक सरो पातलो लुगा मात्र थियो । पैसा पनि सकिइहाल्यो ।
धन्न, फर्केर सकुशल घर आइपुगियो । फर्किंदा पो थाहा पाएँ, घरमा फर्केर आउला र भन्ने चिन्तामा बसिरहनुभएको रहेछ । मैले यो सब कुरा गरेर कसैलाई फुर्ति देखाएको होइन । त्यसरी मजस्तो १२ वर्षेलाई श्रममा लैजाने माओवादीले सत्तामा पुगेर के ग¥यो, अब के गर्ला । ज्याला देऊ, काम गरिखाने, आफ्नै परिवारसित बस्ने अवसर देऊ म फेरि श्रम गर्न जान तयार छु । विदेशमा रगत पसिना चुहाउनु रहर हैन, बाध्यता हो ।
डुंगा दुर्घटनामा १० रोहिङ्गा बालबालिकासहित १२ को मृत्यु
राप्रपाको चुनावी संकल्प : १० वर्षमा सबै नागरपालिका स्मार्ट सिटी
१० वर्षमा एक खर्ब लगानी!
हिँडेर तौल घटाउने १० उपाय
भक्तपुरमा बाढीपहिरो र डुबानबाट १२ करोड क्षति
ट्याक्सी चालकले भेट्टाएको १२ सय डलर फिर्ता गरे
प्रियंकाको फिस १२ करोड
रोकिएन पश्चिम दाङको झाडापखाला, बिरामी संख्या १२ सय पुग्यो
उत्तर काेरियासँगकाे वार्ता जुन १२ मा नहुन सक्छः ट्रम्प
विष्फोटनमा संलग्न १२ जनालाई जेल सजाय
मारवाडी महोत्सवमा १२ हजार सहभागी
नर्भिक अस्पताल २५ वर्षमा
नयाँ वर्षमा बालबालिकासँग नबिल फाउन्डेसन
जनता बैंक नौ वर्षमा
यस्तो छ १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठ)
नयाँ वर्षमा विभिन्न ब्रान्डको अफर
१२ बर्षिया बालिका बलात्कृत, प्रहरी मिलेमतोमा अभियुक्त फरार
महाशिवरात्रीमा १२ लाख भक्तजन आउने
चिकित्सकको लाहपरबाहीले सुत्केरी भएको १२ दिनसम्म गुप्ताङ्गभित्रै प्याड
१२ करोड ५० लाखमा बेन स्टोक राजस्थान रोयल्समा
अब ६५ वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
१२ छोराछोरीका ‘कर्मपिता’
साझेदारीको २५ वर्षमा नयाँ बियर
दूध बिक्रीबाट एक वर्षमा ३८ करोड आम्दानी
नयाँ वर्षमा सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी
पाण्डे १० लाख धरौटीमा छुटे
भीषण आगलागीमा १० टहरा जले
समानुपातिकमा १० लाख मत खेर गयो
थवाङमा १२ वर्ष पछि वर्षमानको एक रात
अर्जुन नरसिंह केसी १० हजार मतले पराजित
बर्दियामा साढे १२ बजेसम्म ४५ प्रतिशत मतदान
आज राति १२ बजेबाट मौनअवधि
भाइरल ज्वरोले एक सातामा १२ जनाको मृत्यु
काखबाट छुटेर खोँचमा पुग्दा पनि बाँचे १० महिने बालक
नेकपाका १२ कार्यकर्ता समातिए
बम विस्फोटमा मारिएका म्यादी प्रहरीका परिवारलाई १० लाख दिइने
माइनस ९ डिग्रीमा ४ घन्टा हिँडेर मतदान
रसुवामा १२ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान
प्रदेश ७ मा वाम गठवन्धनको सिट वाँडफाँट, १२ र ४ सिटको साझेदारी
सर्वनाममा ‘१० मिनेट नाटक मेला’
अफगानिस्तानमा १२ तालिवान लडाकू मारिए
मेलम्चीमा १२ करोडको ग्रिन सिटी पार्क
न्यून सिकाइ उपलब्धी भएका स्कुलाई १० लाख
क्यालिफोर्नियामा लागेको अागाेकाे कारण १० मृत्यु
प्रहरीको गाडी दुर्घटनामा १२ घाइते
१० हजार सवारीलाई कारबाही
भन्सार छलेर भित्र्याइएकाे १० लाख मूल्यकाे कपडा बरामद
दुर्गा भवानीलाई खुसी पार्न १२ हजार बलि
कञ्चनपुरमा बस पल्टिँदा १० जना यात्रु घाइते
अफगान सेनाको कारबाहीमा १२ आतंककारी मारिए
५ वर्षमा पनि बनेन प्रहरी भवन
३८ वर्षमा फेरिएन गाउँ, फेरिएन नारा
हाडनाताकरणीमा १० वर्ष कैद, राज्यद्वारा क्षतिपूर्ति
यी हुन् बलिउडका १० महंगा कलाकार
भोजपुरमा १० हजार मतदाता थपिए
त्रिचन्द्र कलेज सय वर्षमा!
प्रदेश र केन्द्रको चुनाव मंसिर १० मा
कैलालीमा ६० हजार १२ मतदाता थपिए
९८ वर्षमा गौरीमायालाई नागरिकता
१० वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
बलात्कृत १० वर्षीया बालिकाले जन्माइन् बच्चा
१२ वर्षदेखि बेपत्ता छोरो खोज्दै वृद्धा आमा
१८ वर्षमा ९० आविष्कार
बाढीपीडितका लागि जर्मनीबाट १२ लाख रुपैयाँ संकलन
बारामा १२ सय घर डुबानमा
पर्सामा १० वर्षयताकै ठूलो बाढी
भारतलाई २० वर्षमा थप २१ सय जहाज चाहिने
हजयात्राका लागि १२ सय छानिए
आठ वर्षमा पनि बनेन ‘बुटवल अटोभिलेज’
मोरङमा १२ हजार नयाँ मतदाता थप
गाडीको ठक्करबाट एक वर्षमा १७ वन्यजन्तु मरे
जहाज किन्न नागरिक लगानीसँग १२ अर्बको ऋण सम्झौता
सवारी दुर्घटनामा १० घाइते
वनमन्त्रीका १० महिना : एक सय १७ निर्णय
लागुऔषध सहित १० जना पक्राउ
काठमाडौंमा काँग्रेसका जोशी झन्डै ९ हजार मतले पछि परे, १२ हजार मतका साथ विवेकशीलकी रञ्जु तेस्रो
रञ्जुले पूरा गरिन् १० हजार मत
कोहलपुरमा १० वर्षीया बालिका बलात्कृत
१० जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स
यस्तो छ काठमाडौंका १० नगरपालिकाको पछिल्लो परिणाम
एम्बुलेन्समा १२ बोरको बन्दूक, अस्पतालबाट विरामी पक्राउ
मुस्ताङमा १२ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान
धुलिखेल वडा नम्बर १२ को निर्वाचन स्थगित
लमजुङमा मतदान केन्द्रमा १२ सय कर्मचारी खटाईए
निर्वाचन विथोल्न खाेज्ने १२ पक्राउ
एमाले घोषणापत्र : '२५ वर्षमा समृद्ध नेपाल'
इलाममा १० हजारले गरे स्वास्थ्य बीमा
मेलम्चीको पानी बग्ने पाइपमाथि फस्यो १२ चक्के ट्रक
प्रहरी नियन्त्रणमा डिआइजी सिलवालका १० घन्टा
नेपाल रिपब्लिक मिडिया नवौं वर्षमा
नेपाल रिपब्लिक मिडिया नवौं वर्षमा, सबैभन्दा ठूलो छापा नेटवर्क बनाउने घोषणा
१० बाेरा अवैध मजितो र हाडे लसुन बरामद
सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन
नयाँ वर्षमा रुपाकोट महोत्सव
नयाँ वर्षमा पर्यटकीयस्थल भरिभराउ
नयाँ वर्षमा गन्तव्य इलाम
नयाँ वर्षमा पोखराका होटल आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ
श्रम गरेर परिवार पाल्दै बालबालिका
जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख
नुवाकाेटबाट १० करोडको मुला बिक्री
खाडीका महिला घरेलु कामदार जोखिममा: श्रम समिति
चीनको खानीमा भएको दुर्घटनामा १० को मृत्यु
१० महिना पछि खुल्यो गोरखा अस्पतालमा फार्मेसी
१२ राजदूतको नाम अनुमोदन
लाइसेन्स परीक्षामा १० प्रश्न मिलाए उत्तीर्ण
दूतावास ल्याउन १० वर्षसम्म स्पेनबासी नेपालीले के-के गरे?
संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्धारा विमानस्थलको अनुगमन
पशुपतिमा १२ लाख भक्तजन
गैरकानुनी आप्रवासीलाई फर्काउन १० हजार कर्मचारी खटाइयो
रुखको टुप्पोमा १२ घन्टादेखि चितुवा (फोटो/भिडियो)
चुनाव मिति घोषणा फागुन १० अघि
श्रम स्वीकृतिभन्दा बिमाको अवधि बढी
१२ कक्षाका विद्यार्थीद्वारा आत्महत्या प्रयास
अपार्टमेन्टले भुक्तान पाएनन् ४ अर्ब १० करोड बिमा दाबी
बाघले झम्टिँदा प्रहरीसहित १० जना घाइते
ओभरटेक गर्न खोज्दा माइक्रोबस ट्रकसँग ठोक्कियो, १२ घाइते
‘१२ दुवार्सा’ मा न्यायिक बहस
‘नागमणी’ खोजी धन्दा गिरोहका १० पक्राउ
१६ वर्षमा पूर्णिकालाई नागरिकता
यी हुन् नेपालका उत्कृष्ट १० होटल
ओली र राष्ट्रकविले फहराए १० मिटर लामो राष्ट्रिय झन्डा
१२ वर्षीया बालिका करणीको अभियोगमा राउत पक्राउ
'बाउले बिहे गर्देनन्'का गायक ओझा पक्राउ, १० वर्ष कैद
निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने
भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्न १२ अर्बको अख्तियारी
ममतालाई १० लाख ३५ हजार सहयोग
१० दिनमै उल्टियाे कामदारसँग लेबी नलिने मलेसियाली निर्णय
नागढुंगा-त्रिपुरेश्वर सडक खण्डको १२ किलोमिटरमा २५ 'स्टेअर्डर'
विद्युत् पीपीए दर सार्वजनिक, जलाशययुक्त अायाेजनालार्इ प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म
जलाशय आयोजनाको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म
नेपालमै १० हजार मेगावाट बिजुली खपत
तीन वर्षमा बनेन १.५ किमि सडक
वर्षमा २०७ दिन प्रदूषण
१२ वर्षको उमेरदेखि बाजागाजामा रमाउँदै
मुसहर बस्ती बनाउन धुर्मुस पुगे बर्दिबास, नयाँ वर्षमा घर उपहार
कालिकोटमा बस दुर्घटना १२ घाइते
१० करोड मन्त्र जप
रेस्टुराँमा याैन धन्दा गरेकाे अाराेपमा १० पक्राउ
चार वर्षमा १ करोड ७ लाख क्विन्टलले घट्यो
प्राधिकरणको एमडी बनाइ दिनु भन्दै उर्जामन्त्रीलाई १० करोडको अफर !
बाँके निकुञ्जमा सात वयस्क पाटेबाघ, एक वर्षमा तीन थपिए
विद्युत चुहावट १२ प्रतिशतमा झार्न सकिने
स्कुल गएका सन्तोष १० दिनदेखि बेपत्ता
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ब्याडमिन्टनका १२ खेलाडी छनौट
प्रदेश सीमाना हेरफेरको विरोधमा गुल्मीमा उल्टो हिडेंर प्रदर्शन
४ दिन हिँडेर अाएका बाराबासीले प्रधानमन्त्रीलाई दिए १ रुपैयाँ !
१२ दिने गुफा एक रातमै
बाइकको एयर फिल्टरमा १० किलो सुन !
माेटरसाइकलकाे फिल्टर बक्समा १० किलो सुन फेला
सरकार विस्तार, कांग्रेसबाट १० राज्मन्त्री थपिए